Ra'isulwasaaraha iyo xaaskiisa oo Muqdisho ka bilaabay ololahooda doorashooyinka
Ra’isulwasaaraha iyo xaaskiisa oo Muqdisho ka bilaabay ololahooda doorashooyinka
Waxaanakulanka soo qaban qaabiyay Agaasimaha Dhalinyaradda ee xafiiska Ra’iisulWasaaraha Soomaaliya, Mr. Cabdulqaadir Khaliif Telegaraas.Waxaana Sidoo kaleKulanka goobjoog ka aheyd Marwada Ra’iisul Wasaaraha Hodan Saciid Ciise.
Uguhoreyn Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahayla kulanka Qeybaha kala duwan ee Ururada Dhaliyaradda Soomaaliyeed islamarkaanatilmaamay in Dhalinyaradda ay yihiin kuwa hormuudka u ah dalka.
“Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan kulan la qaato Ururada Dhalinyaradda Soomaaliyeedwalibana aan ka wada hadleen Xaaladda Soomaaliya, waad ogtihiin dalka waxaahormuud u noqon kara waa dhalinyaro, marka dal aan dhalin laheyd waa dabar la’aan,Waxaa tihiin awoodii dalka la idin ka rabo inaad gaarsiisaan meel sare oomustabal leh”.
Sidookale Waxaa kulanka ka hadlay Agaasimaha Ururka Kacdoonka La dagaalankaQabyaaladda (Anti Tribalism) AadanMataan oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yihiin la kulanka Ra’iisulWasaaraha Soomaaliya, islamarkaana tilmaamay in Ururkooda uu yahay mid ladagaalamaya Qabyaaladda ay sida xun u isticmaashay Soomaalida qaarkood, Wuxuunaintaasi ku daray in dhalinyaro badan ay ka wacyi geliyeen sidii ay uladagaalami lahaayeen Qabyaaladda loo adeegsanayo dhanka xun.
Waxaana Sidoo kale iyagana kulanka ka hadlayJamaal C/raxmaan Axmed, Cawil Maxamed Xuseen, Muna Saciid oo talooyinka muhiim ah goobta kasoo jeediyay.
Kulankaaniayaa ahaa kii ugu horeeyay oo ay isugu yimaadaan 21 Urur oo dhalinyara ah,Kuwaa oo la kulma Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed CaliIslamarkaana ka wada hadla Xaaladda Soomaaliya iyo Sidii ay door muhiim ah ugaqaadan lahaayeen Dhalinyaradda.